> Resource> Flash Drive> Olee otú iji naghachi faịlụ site formatted Flash Drive
Chọrọ enyemaka iji naghachi faịlụ site formatted Flash Drive on My Mac
M chọrọ iji naghachi faịlụ site na a formatted flash mbanye. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ ime nke a? M mkpa faịlụ ndị dị na a nchekwa na flash mbanye na M na-eji a Mac .... Biko nyere m aka!
Hoo haa ikwu okwu, ndị formatting adịghị ehichapụkwa mbanye kpamkpam. Files n'ime flash mbanye bụ nanị apụghị ịhụ anya. Ị nwere ike mfe weghachite ha ogologo oge ka ha adịghị e overwritten site ọhụrụ data. Ya mere, iji naghachi faịlụ site na formatted flash mbanye, ihe mbụ i kwesịrị ime bụ ịkwụsị iji gị flash mbanye. Mgbe ahụ ị pụrụ abịa internet ịchọta a data mgbake omume na-arụ ọrụ maka Mac.
Wondershare Data Recovery for Mac Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery bụ m nkwanye maka gị. Ọ bụ dakọtara maka ma Windows na Mac OS. Ị ga-enwe ike naghachi akwụkwọ faịlụ, foto, videos, audios, Archive faịlụ na ọbụna ozi ịntanetị site na gị formatted flash mbanye. The flash draịva-akwado site na Wondershare Data Recovery agụnye SD kaadị, SDHC kaadị, MMC kaadị, CF kaadị, Memory Stick, wdg
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke Wondershare Data Naghachi na mgbe ahụ na-amalite formatted flash mbanye data mgbake na gị Mac.
Igosi formatted Flash Drive Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Ebe a anyị na-hazie mgbake na Wondershare Data Recovery for Mac. Windows ọrụ biko ibudata Windows version.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị flash mbanye na Mac na họrọ mgbake mode na-amalite mgbake
Wụnye Wondershare Data Recovery for Mac na gị Mac na-agba ya, ị ga-awa na 3 mgbake ụdịdị na mmalite interface. Naghachi faịlụ site na formatted flash mbanye, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode ịnọgide.
Cheta na: Ebe ọ bụ na mgbake ga-eme na gị Mac, biko mee ka n'aka na gị flash mbanye na-ọma ejikọrọ na gị Mac.
Nzọụkwụ 2 Họrọ gị formatted flash mbanye ka iṅomi maka furu efu faịlụ
Mgbe na-ahọpụta "Echefuola File Iweghachite" mode, usoro ihe omume ga-depụta niile ezi uche draịva gị Mac gị, gụnyere flash mbanye. Ị dị nnọọ mkpa họrọ gị flash mbanye na pịa "iṅomi" na-chọọ na flash mbanye.
Rịba ama: I nwekwara ike "Kwado Deep iṅomi" ka mma scanning N'ihi.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na gị formatted flash mbanye selectively
Mgbe iṅomi, niile hụrụ ọdịnaya ga-edepụtara dị ka faịlụ ọnọdụ. Ị nwere ike ịlele faịlụ ndaba tupu mgbake. Ọzọkwa, ị pụrụ ịhụchalụ photos, ozi ịntanetị, akwụkwọ na ụfọdụ n'ime audios na vidiyo.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachite na pịa "Naghachi" zọpụta ha gị Mac.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta weghachiri eweghachi faịlụ gị flash mbanye ozugbo ke mgbake. Ma ọ bụghị mgbake nwere ike ada.